Iprofayile yenkampani-Shenzhen SH-MBR Technology Co., Ltd.
I-Shenzhen Shuihuan-MBR Co. Ltd ngumvelisi wezixhobo zokucoca amanzi amdaka ze-MBR. Sibonelela ngokudibeneyo kwezixhobo zonyango lwe-MBR nonyango lwe-PVDF iiyunithi zefayibha ezingenanto, ezisetyenziswa kakhulu ekunyangeni amanzi amdaka asemashishini nakwamasipala., ezifana nogutyulo lwasesibhedlele, iihotele, iidolophana, iidolophu, amaziko emfundo, iindawo ezibukekayo njalo njalo.
I-Shenzhen SH-MBR Co. Ltd ifumaneka eShenzhen, esona sixeko sanamhlanje e-China. Sineefektri ezimbini zokuvelisa izixhobo zonyango lwe-MBR ezihlanganisiweyo kunye neemodyuli zefom membrane. Omnye umzi mveliso ikhona in Iphondo leLiaoning kunye nelinye likhona Iphondo laseJiangxi. Sinamava angaphezulu kweminyaka eli-16 kunyango lwamanzi amdaka e-MBR. We ukubonelela ngonyango lwelindle, ufakelo, ukubonisana, ukuqinisekiswa, ukuvavanywa nolondolozo ukuqinisekisa ukuthotyelwa okuqhubekayo.
Sijonge iqela lokhuselo lokusingqongileyo phesheya kunye nonyango lwamanzi amdaka kubantu ababalaseleyo kwintsebenziswano enobuchule. Sinikezela ngeseti epheleleyo yenkxaso yetekhnoloji yemveliso, imveliso, intsebenziswano, kunye ngokudibeneyo sakha isiseko semveliso.